Openage: Iyo Yakavhurika Sosi Clone yeiyo Zera reEmpires II Injini yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Graphics, Linux Mitambo, Free Software
Openage chirongwa chakagadzirwa nevazvipiri uye isingabatsiri, ndeye mahara uye mahara. Ivo chaizvo vanoedza kugadzira dhijitari yeiyo nzira yemavhidhiyo injini injini, inozivikanwa Zera reEmpires II, mutambo unonyatso kuzivikanwa kune vanoda zano vanobva ku Microsoft Windows chikuva. Chikwata chevagadziri chakanetseka kugadzira zita iri ravakanyorera kuGNU / Linux chikuva kuitira kuti maLinuxers vagone kunakidzwa nemutambo uyu unovaraidza.
Zvekusikwa kweOpenage, vakanyorazve injini yemifananidzo muC ++ kubva pakutanga uye vakaiburitsa pasi pe GPLv3 + rezinesi. Iyi injini haina kushata zvachose, inosanganisira chaiwo matekinoroji, kunyangwe asiri ekucheka-kumucheto, inoenderana neOPenGL neGLSL. Izvi zvichave zvakakwana kutamisa iwo magiraidhi emuvhidhiyo mutambo uyu wandinokurudzira iwe kuti uedze. Iyi purojekiti inofananidzwa nezvimwe zvakakosha seOverMW, OpenRA, OpenTTD uye OpenRCT2.
Vagadziri vega vakataura kuti, kunyangwe ichiri mukuvandudzika, vanoedza kugadzira injini yakafanana neiyo yekutanga Zera reEmpires II. A) Hongu, inogona kuridzwa natively paGNU / Linux masisitimu anoshanda, iine zvimwe zvakawanda zvinowedzerwa zvichienzaniswa neyekutanga uye netumwe tudiki tudiki, kugona kushandisa zviwanikwa zvekutanga kubva muAge Of Empires mutambo wevhidhiyo senge ruzha, mifananidzo, nezvimwe ... Kana iwe uchida kuona kodhi uye nerumwe ruzivo nezve iyo purojekiti, unogona kushanyira iyo GitHub webhusaiti yeiyi inonakidza projekiti, iyo yandinokusiya iwe pano mu link.
Kuti utambe, unogona kukopa iyi injini uye zvakare iwe unoda iyo yekutanga AOE II. Uye saka iwe unozorangarira zvengano hondo pakati pevanhu veAOE II iyo yakakupa iwe yakawanda yakanaka nguva munguva yakapfuura uye kana usati wambozviedza izvozvi, iwo mukana wakanaka kuzviita izvozvi. Bvisa zviwanikwa, uvake nhare yako uye uvake mauto eapo pavanokurwisa kana paunorwisa kuti utore nyika.
Ndinovimba uyu, yangu yechi1000 chinhu cheLxA wakazvifarira, senge imwe 999. Semazuva ese, ini ndinozvininipisa ndinoedza kupa zvinonakidza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Openage: yakavhurika sosi dombo yeiyo Age YeEmpires II injini yeLinux
wow ini ndinogona pakupedzisira kuiridza pane linux: 3
Ndatenda zvikuru nemipiro yako :)
Ndeapi mashoko akanaka kune linuxers :-)
Ndezvipi zvinorangarira izvo. Zvirokwazvo imwe yemitambo yemitambo yakatungamira nzira, ipapo "Empire Earth" yakandishamisa (uye yakawanda). Pasati pave ne "Sim Guta"; ndizvo zvinodaidzwa nemunhu wese "mitambo isinganakidze" nekuti vanobatanidza kufunga nekuita. Nhau dzakanaka, yakanaka kwazvo kupinda.
Makorokoto angu pazvinyorwa zve Ⅿ, zviri ???, ndizvo ??? ??.
Kuvhura, kuvhuraRA, 0 AD,…. mutambo mukuru mushure memutambo mukuru
Nemukana chero upi zvawo, inogona kushandiswa pane mac? (uchifunga kuti inoshandisa UNIX tekinoroji ??): $
Yakasvika rini Halo CE? : 0
Ricard castello akadaro
Pindura Ricard Castello
kuti munguva pfupi hapachazodiwi PlayOnLinux kana waini: v
ExTiX kugoverwa kweLinux ine kukwana kwenyika yakaigadzira
Iceweasel ichave Firefox zvakare